ktmkhabar.com - राजेन्द्र लिङ्देनले गरे मतदान, लिङ्देनको पक्षमा कस्तो आउला परिणाम ?
राजेन्द्र लिङ्देनले गरे मतदान, लिङ्देनको पक्षमा कस्तो आउला परिणाम ?
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले शुक्रबार बिहान झापामा मतदान गरेका छन् । उनले झापाको हल्दिबारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ को कार्यालय रहेको बुथमा मतदान गरेका हुन् ।
गत महाधिवेशनबाट राप्रपाको नेतृत्वमा आएका लिङ्देनका लागि यो निर्वाचन परीक्षाको घडी भएको छ। लिङ्देनले पार्टीलाई बलियो बनाउने बताउँदै आएको सन्दर्भमा यो निर्वाचनबाट कस्तो नतिजा आउला भन्ने चासो छ ।
राजेन्द्र लिङ्देनराप्रपा अध्यक्ष